Kaarka Ganacsi ee Flash Drive | Martech Zone
Haddii aad aqriso balooggan xoogaa, waad ogtahay inaan ahay nuugayo tiknoolajiyadda… iyo kaararka ganacsiga. Markii aan qof la kulmo oo ay i siiyaan kaar, aad ayaan u xukumaa. Shalay, waxaan la kulmay Rob Bacallao oo ka yimid Shaqaale Sharf oo isagu wuxuu ii dhiibay quruxdan:
Kaarka ganacsiga wafer flash drive kaarka ganacsiga Flashbay waa quruxsan yahay - wuxuu ku imanayaa 2Gb, 4Gb, 8Gb iyo 16Gb noocyada, waa kuwan sharaxaadda internetka:
Waafer USB Card waa mid ka mid ah Kaararka USB-yada ugu khafiifsan adduunka oo dhumucdiisuna tahay 2.2mm kaliya. Labada dhinac ee Kaadhka USB-ga waxay noqon karaan sawir gabi ahaanba lagu daabacay midab firfircoon oo buuxa. Aagga caanka ah ee la aqoonsan yahay ayaa hubin doona in astaantaadu ay tahay mid caan ah - shirkadaha badankood waxay doorbidaan inay soo gudbiyaan naqshad dhammaystiran si ay u daboolaan dhammaan kaarka USB halkii ay ka noqon lahaayeen astaanta keligood ah. Kaararka USB-ga ayaa si habsami leh ugu dhex dhacaya jeebkaaga, jeebkaaga ama qabanqaabiyaha waxayna qaadan doonaan boos yar.
Waxay umuuqataa hadaan ahaa sawir qaade, waxaan iibsan lahaa sanaadiiqda kuwaan si aan ugu tuuro shaybaarrada qaarkood!
Tags: kaarka ganacsiflash kaarka ganacsigaflashbayflashdriveTechkaarka wafer
Febraayo 1, 2013 saacadu markay tahay 11: 03 AM
Xariif ah. Taasi way fiicnaan lahayd 5 sano ka hor, laakiin hadda waxaan u maleynayaa in isku xirka YouTube ama Vimeo ay ka haboonaan laheyd.
Febraayo 1, 2013 saacadu markay tahay 11: 10 AM
Iyo wax ka qaalisan…. laakiin ma aha sida qabow! 🙂
Febraayo 2, 2013 saacadu markay tahay 11: 32 AM
Ka wanaagsan kuwa ku xaddidan kuwa aad xiriirka la leedahay ee ugu mudan. Waxay ku kacayaan inta udhaxeysa $ 7 ilaa $ 10 / midkiiba.
Feb 2, 2013 markay ahayd 7:29 PM
Waxay ku saabsan tahay soo laabashadii… laakiin way qaali yihiin.